Upenyu zvakanaka kana kuti kubvisa mbiriso chirwere zvachose.
Thrush - ane chirwere zvikuru hachifadzi kuti mukadzi wose ajaira. Mukurapa, yakafanana rokuti "candidiasis", somumiririri iri chakuvhe kuna Candida, siyana mhando izvo pane pamusoro ganda uye pamusoro mucous membranes, uye zvakatipoteredza. Kuna chakuvhe apinda muviri, zvinoda Mamiriro ezvinhu, asi kamwe mukati rwunotanga zviwande nokukurumidza sezvo tembiricha munhu akasikwa kuti ichi.
The inonyanya chimiro -vlagalischny candidiasis, umo mukadzi pakarepo anotanga vanoshamisika, "How ndeyokubvisa mbiriso chirwere nokusingaperi?" Uye akamhanya naye kwachiremba. Zviratidzo zvokutanga hanya -zud ari perineum uye nyinyo. Gare gare, chiremba anowana mucosa, akafukidza chena maruva. Mukuwedzera, kuvaviwa ichatanga achiperekedzwa cheesy buditsa. The chirwere mberi ne kusimba kutapata, kana nengaidzo pakati kurwisa muviri kuna nayo utachiona hweHIV uye kushingaira maberekero zvakachinja akananga chechipiri.
Kana maitiro zviratidzo abate gayinakorojisiti wako avo vanonyorera ongororo kuti vasimbise kuti thrush. How kubvisa pakafunuka panyaya yakanaka nechirwere, nyanzvi vachataurawo, nekuti dzimwe nguva thrush inogona pamwe nezvimwe zvirwere, izvo vanofanira kubatwa.
mushonga Modern anoziva sei kubvisa mbiriso chirwere zvachose. Izvi kunoda Integrated uye phased nzira kurapwa, iyo kunotadzisa kuitazve predisposing zvinhu kuwedzera chisvetasimba. Kubvisa mbiriso chirwere zvachose unofanira kutora mushonga zvose topically uye nechomukati. Recurrences vari kakawanda kuwanikwa vakadzi kwemakemikari anobudiswa zvirwere uye vamwe chirwere zvirwere.
Mune zvimwe zviitiko, ushandiswe mishonga regai kubatsira, uye mubvunzo "zvinobvira kubvisa mbiriso hweHIV?" Chinoramba zvakatowanda chakasimba. Kudzivisa chirwere ichi nyaya icharatidza nhevedzano Analyses zvainanga kugadzirisa munhu kudzivisa kuitwa zvimwe zvinodhaka Anti-fungal.
Mukadzi wose anofanira kuziva kuti chete misoro kurapwa vachakuratidza sei ndeyokubvisa mbiriso chirwere zvachose. The zvokukura kurapa kwakadaro muudzame:
1) kudzvinyirira pamusoro fungal basa,
2) zviyero zvainanga kuwedzera kushanda zvirwere,
3) Matanho anotorwa Zvisinei kudzorera chakaipa kusangana nekutsi kwemukadzi microflora, pamberi acidity ichi yakachena zviratidzo, nokuti yawedzera prices ayo akanakira kukura chakuvhe.
Kunyange pasinei vanenge kubata thrush, sei ndeyokubvisa pakafunuka achiri haazivi, nokuti anosika yakawanda mumuviri kusanzwa. Kuchiparadza kuguma mishonga asati angangotadza zvinobvira.
Matanho risati kurapwa
Usati kubvisa mbiriso chirwere zvachose, achibatsirwa mushonga zvinodhaka chiremba wako (kana usina kukwanisa kushandisa nawo), unogona kutora zvinoverengeka zviyero kuti kudzvinyirira pamusoro fungal basa:
- Regai kuita bonde kwemazuva 10,
- kuti kakawanda kuchenesa uchishandisa aqueous mukugadzirisa zviri yavaibvisa kana furatsilina,
- kuchengeta kudya: murege kupedzana mufushwa, nezvinonhuhwira uye Spicy zvokudya kuti zvimwe arege kuwedzera acidity kuti weti, sezvo izvi kuchawedzera pakafunuka; Vandudza kudya michero, miriwo, zviyo, etc.
- kuti chaizvo pashure kurapwa ndinomboora anogona kubvisa mbiriso chirwere, siya zvose zvinhu zvinogona kukonzera mutambo mapundu, ziya uye hasha,
- kushandura utsanana napkins panguva yekutevera kakawanda, kuitira kuti pave zvakanaka zvakatipoteredza kukura chakuvhe.
Pakupera nyaya Ndinoda kuona kuti haufaniri kuvimba kushambadzira, anoti kubvisa mbiriso zvirwere zvinogona mazuva sezvo shoma sezvo zvitatu. Kunenge kuti kurapa kwakadaro achabvisa zvazvo, sezvo chero kana chakaipa yawapiwa mazuva anenge 7-10.
Ndozvakajairwa mu serum creatinine vakadzi nevarume
Corporate mutemo - iri sayenzi
Ship "Ural" - wongororo. Photos, Prices
Shop "Oldie": inofambiswa kubva mudonzvo uye vatengi